Ogaalnews.net oo Khashifay Xidhiidhka u Dhaxeeya UBO iyo SNM – Rasaasa News
Ogaalnews.net oo Khashifay Xidhiidhka u Dhaxeeya UBO iyo SNM
Feb 21, 2012 Ethiopi, Ogaalnews.net oo Khashifay Xidhiidhka u Dhaxeeya UBO iyo SNM, ONLF, Somali
Hageysa, February 21, 2012 [ras] – Wargayska Ogaaalnews ee ka soo baxa magaalada Hageysa ee maamulka SNM, ayaa qoray 20/2/2012 in ciidamo UBO ah, ay todobaadkii hore ka soo degeen xeebta Bulo-caddo oo ay dhawr goor oo hore ka soo dageen.
Wargayska ayaa faahfaahiyey in ciidamadaasi ay soo galeen magaalada Hargeysa iyo waliba tirada ciidanka oo uu ku sheegay 90, laakiin uusan wargaysku meel laga dajiyey magaalada Hargeysa. Wargaysku wuxuu sheegay oo kale in ay jiraan goobo ku yaal Somaliland oo lagu uruuriyo laguna tabobaro budhcada UBO.
Islamarkii uu warkani saaka ku soo baxay wargayska ayay ciidamada SNM xidheen tafatiraha wargayska ogaalnews.net, lama oga meel ay geeyeeen ciidanka SNM tafatiraha wargayska Ogaalnews.
Taliyaha ciidanka xeebaha ee maamulka SNM Gen. Axmed Aw Cismaan, ayaa isla markiiba qabtay shir jaraa,id oo uu ku beeninayo qoraalka uu qoray wargayska Ogaalnews.net. Taliyaha xeebaha ayaan wax faah faahin ka bixin arimaha uu wargaysku qoray, balse ku gaabsaday in uu xidhiidh wanaagsan ka dhaxeeyo Ethiopia. Qoraalkii ku qoraa Ogaal waa laga saaray, laakiin warkii lagu beeniyey ayaa ku qoran Somaliland.org.
Tan iyo intii uu Siiraanyo noqday madaxweynaha maamulka SNM, waxaa soo baxayey warar sheegaya in maamulka Somaliland uu taageero budhcada UBO.
Waxaa sanadkii 2012 si badheedh ah uga soo dagay xeebta Bulo-caddo ee maamulka SNM ciidamo budhcad ah oo tiradoodu gaadhayso 200, kuwaas oo ay ka hortageen ciidamada Ethiopia.
Waxaa hargeysa lagu hayey mudo 2 bilood ah shaqaale qaramada midoobay oo laga soo afduubay degaanka Somalida Ethiopia, kuwaas oo kolkii dambe la siidaayey.
Dhawr goor oo dambe ayaa la qabtay ciidamo budhcad ah oo ka soo talaabaya xadka maamulka SNM. Ethiopia ayaa digniino badan siisay maamulka Somaliland in uu joojiyo deganaansho la,aanta uu ka abuurayo dalka Ethiopia.
Waxaa dhawr goor oo hore la shaaciyey in uu xidhiidh dhaw u dhaxeeyo Eritrea iyo maamulka Somaliland, Shacbiya ayaa siisa tababar qarsoon ciidanka SNM iyo waliba hub.
Xaqa hadii afka la qabto feedhuhuu ka dilaacaa, waxaa maanta dhab ah in dadweynaha ku nool waqooyi galbeed Somaliya ayna ka qarsoonayn in ay dalkooda joogaan ciidamo budhcad ah oo lid ku dalka Ethiopia, gaar ahaana shacbka degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaase isweydiin leh sababta uu maamulka SNM, ee madaxda ka yahay Siiraanyo ay u jecel yihiin dhibaatada Ethiopia. Arinta colaada maamulka Somaliland waxay dabada ku haysaa heshiiska nabadeed ee ay qaateen ururadii hore ugu kacsanaa Ethiopia, halkaas oo uu maamulka SNM tabayo in ay waayeen fursado uga furaa Ethiopia.
Waxaan suurto gal ahayn in dawlada Ethiopia iyo ciidamadeedu ay indhaha ka qabsadaan maamul yar oo ay daris yihiin oo u tafo xaytay waxyeelada dalka.
Wax Soo saar Suuq La,a iyo Abaar la Saadaalinayo
Qurbo Joogta W/galbeed Somalia oo Laga Joojiyeyey Banbax